पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन ! असार १४ गते देखी असार २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन ! असार १४ गते देखी असार २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल !
२०७७ असार १४ गते देखी असार २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमा पुरानो लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा नयाँ लगानि नगर्नुनै उत्तम रहनेछ । परीवारका सदस्यहरुबाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साजेदारीमुलक कार्यमा साबधानि अपनाउनु राम्रो रहनेछ । साताको अन्त्य तिर सामान्य वादबिवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । आफन्तजनबिचको सम्बन्धमा समेत सामान्य तिक्तता उत्पन्नहुनेछ । कार्य क्षेत्रमा गोप्यता अपनाउनु उत्तम रहनेछ । खानपानको गडबढीका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।